Allende, Espinosa, Asensi, Villar, Moccia ... 8 vatengesi vakanyanya vemwedzi iyi | Zvazvino Zvinyorwa
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Vanyori, Mabhuku, Novela, Nhema nhema, Romance novel
Vamwe vangobuda uye vamwe vanga vari pamusika kwechinguva, asi vatove pamusoro pezvakanakisa-zvinyorwa zvinyorwa. Mazita ekupedzisira saALlende, Espinosa, Asensi, Villar, Moccia, Hess, Monfort kana Del Val ndivo vanyori bestseller izvo zvakamira kunze muhafu yekutanga yegore. Ngationgororei iyo titles yeizvi zvitsva zvinorova kubva kune vanyori vaimbozvijairira.
1 Yakareba yegungwa petal - Isabel Allende
2 Chinhu chakanakisa nezvekuenda kudzoka - Albert Espinosa
5 Husiku chiuru pasina iwe - Federico Moccia
6 Vakadzi vanotenga maruva - Vanessa Monfort
7 Imba yeGerman - Anna Hess
8 Chikepe chekupedzisira - Domingo Villar
Yakareba yegungwa petal - Isabel Allende
Allende inopfuura yakashandiswa kune yakanakisa mutengesi chinzvimbo. Iyi ndiyo nyaya yake ichangoburwa.
Tiri kuenda kuHondo yeVanhu pamwe nachiremba wechidiki Víctor Dalmau uyo, pamwe chete neshamwari yake yepiyano Roser Bruguera, vanofanirwa kusiya Barcelona mukutapwa kuFrance. Vanofamba nechikepe mu Winnipeg, ngarava yakachairwa nanyanduri Pablo Neruda iyo yakatora vanopfuura zviuru zviviri veSpanish kuChile. Ikoko ivo vanogamuchirwa semagamba uye vachabatanidzwa munharaunda yenyika kudzamara kwakapidigura Dr. Salvador Allende, shamwari yaVictor nerudo rwavo rwese rwechesi.
Chinhu chakanakisa nezvekuenda kudzoka - Albert Espinosa
Mumwe anoshandisa iro zuva ari anotengesa zvakanyanya ndiAlbert Espinosa. Uye ichi chako chitsva chikumbiro mumutsetse wake wenguva dzose we tarisiro yetariro ine manotsi efilosofi. Iyo inyaya yezve ndangariro, ruregerero uye rudo kuti mune rimwe zuva, Kubvumbi 23, pakati peguta reBarcelona nezvitsuwa zveIschia neMenorca.
Del Val anga ari Chitubu Novel Mubairo 2019 nebhuku rino apo patinosangana naCandela. Iye mukadzi ane makumi mana emakore ane hupenyu hwakajairika, aigara ari ega, anonyatsocherechedza uye aine hunhu husina kusetsa. Muchidimbu, iyo mufananidzo wemukadzi akasarudzika.
Inoenderera mberi ichitengesa, Asensi anotora mukana neinovhero uko iyo tsika dzechiJapan tsika neyekupenda kupenda, ukiyo-e anodhinda uye yemumugwagwa art. Semufananidzo kune izvi zvese uye zvakare kune vatambi uye nenyaya, pane izvo Cherry Blossom, zita rekuti sakura, iro rinomiririrawo runako uye kupera kwehupenyu. Zvese kufumura enigmas dze kunyangarika kwekupenda kwaVan Gogh yakatengwa nemusoone wechiJapan.
Husiku chiuru pasina iwe - Federico Moccia
Hazvigoneke kuverenga zita remuItaly uyu uye usingafunge nezvemabhuku anotengesa anotenderera. Iyi ndiyo chikamu chechipiri che Nhasi manheru ndiudze kuti unondida. Dzokera ku Sofía, protagonist, uyo mushure mekumira muRussia, anosarudza kuisa hupenyu hwerudo muhurongwa. Asi parwendo kuenda kuSicily kunoshanyira vabereki vake iye anowana a chakavanzika chemhuri zvichakutapura zvikuru.
Vakadzi vachitenga maruva - Vanessa Monfort
Zvinyorwa mune zvechikadzi pa vakadzi vashanu vanogara pakati peguta uye kazhinji vanotenga maruva zvikonzero zvakasiyana siyana: nekuda kwerudo rwake rwakavanzika, kuhofisi yake, kupenda iwo, kune vatengi vake, kana ... kumunhu akafa. Uye ndiye protagonist uyo anotaurira nyaya yake.
Imba yechiGerman - Anna Hess
Imwe nyaya yemukadzi protagonist ndeye iyo Eva bruhn, ane hupenyu hunotenderera Iyo yeGerman Imba, iyo chikafu chetsika vanomhanya nevabereki vavo uye kwavanogovana vese zuva ravo zuva nezuva.
Asi mukati 1963 ramangwana rinoita kuti Eva aite chiito muturikiri mukuyedzwa kwekutanga kwe Auschwitzkunyangwe achipikiswa kubva kumhuri yake. Uye kana zvoenda kududzira zvipupuriro zvevakapona, tsvaga kutyisa kwe misasa yevasungwa uye chikamu chenhoroondo yazvino yandakanga ndisingazive nezvayo.
Ngarava yekupedzisira - Domingo Villar
Izvo hazvina basa kuti makore gumi apfuura kubva kuburitswa kwebhuku rake rapfuura, iwo mamwe chete ayo vateveri vake vakazvipira kwazvo vanga vakamirira izvi dhirivhari nyowani yeimwe nyaya kwaari Vigo muongorori Leo Caldas. Izvo zvave zvakakodzera nekuti Villar adzokera panzvimbo pamusoro kubva kuvanyori vanotengesa zvakanyanya. Muenzaniso we musanganiswa wakakwana pakati pe nyaya yetsika nenzvimbola mutikitivha novel uye imwe mavara kuti vakabatana naye makore apfuura moyo yevaverengi vako.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Novela » Allende, Espinosa, Asensi, Villar, Moccia ... 8 vatengesi vakanyanya vemwedzi iyi
José Antonio Ramos Sucre: mudetembi akatukwa?